Sina - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Shina
Ahoana ny fomba hahitana asa any Beijing?
Enga anie 28, 2021 Antika Kumari Shina, asa
Beijing no renivohitr'i Shina ary, tsy ampoizina, tanàna manana vinavina ho an'ny matihanina ho an'ny teratany sy ny taloha. Makà fotoana kely hianarana momba ny tsenan'ny asa ao an-tanàna sy ireo safidy asa hafa mety alohan'ny dia mankany Beijing ary manomboka an
Trano sy fanofana any Sina
Janoary 29, 2021 Antika Kumari Shina, trano
Mba hahitana ny trano hipetrahana mety ao Shina, mila hafainganam-pandeha, fikirizana ary, namana tsara na realtor miteny ny fitenim-paritra eo an-toerana. Handeha hamakivaky anao amin'ny karazan-trano fampiantranoana misy ianao, izay mety hitranga
Mangataha Asylum: any Sina. Fantaro eto !!
Oktobra 31, 2020 Karuna Chandna Shina, mpitsoa-ponenana
Ny biraon'ny UNHCR dia any Beijing. Niorina tamin'ny taona 1980 izy io. Nisy mpitsoa-ponenana tany Sina nanomboka teo. Ireo mitady fialokalofana any Shina dia eken'ny governemanta Shinoa ary arovan'ny. Misorata anarana ho an'ny fanamavoana: Sina. Araka ny UNHCR,
Septambra 16, 2020 Antika Kumari Shina, visa ho
Mandritra ny fangatahana visa any Shina dia misy ny dingana tokony harahinao. Ny tena zava-dehibe dia manampy raha manana pasipaoro manan-kery hampiharana ny visa ianao. Misy taratasy fangatahana ilainao
Karazana fitaterana azonao tratrarina any Sina?
Enga anie 20, 2020 Antika Kumari Shina, mandehana
Nihatsara ny rafitra fitaterana an'i Shina nanomboka tamin'ny 1949. Ankehitriny i Shina dia manana tambajotra seranam-piaramanidina, lamasinina, làlambe, làlambe, seranan-tsambo ary lalan-drano. Anisan'ireny, ny lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha, ny làlambe, ary ny metro maro hafa izay nanatsara ny fiainana andavanandron'olona.
Vidiny fitsangatsanganana any Sina
Aprily 21, 2020 Shubham Sharma Shina, Travel
Sina no firenena be mponina indrindra eto an-tany ary any Azia Atsinanana no misy azy. Shina dia manana ny toerana mampientanentana indrindra eran'izao tontolo izao izay tsy maintsy hitan'ny tsirairay indray mandeha amin'ny fiainany. Tonga amin'ny sakafo ho azonao
Ampiharo ny nofinao amin'ny fahazoana asa any Sina
Aprily 14, 2020 Shubham Sharma Shina, asa
I Sina, izay firenena be mponina indrindra eto an-tany dia fantatra koa ho iray amin'ireo toekarena lehibe indrindra eto an-tany. Tonga amin'ny toe-karena any Shina, io dia mihanondrika isan-taona. Manjary mamorona betsaka amin'ny tolotra asa koa izany
Andao hizaha ny Sina Mahafatifaty amin'ny fotoana mety indrindra
Aprily 2, 2020 Karuna Chandna Shina, Travel
Fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Chine dia toerana fitsangatsanganana mandavantaona i China. Na inona na inona fotoana halehanao dia misy toerana foana izay mendrika hitsidika anao. Amin'ny toetr'andro, ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Shina dia ny lohataona (Aprily – Mey) sy ny fararano (Septambra – Oktobra), izay ny ankamaroan'ny